Eoropa Andrefana · Oktobra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Oktobra, 2011
Eoropa Afovoany & Atsinanana 31 Oktobra 2011
Julie Kertesz dia nanomboka nibilaogy sy naka sary teo amin'ny faha-70 taonany. Ankehitriny eo amin'ny faha-77, fakàn-tahaka izy ho an'ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra izay maniry ny hiaina fiainana feno sy mavitrika amin'ny fianarana sy ny firotsahana an-tsehatra. Mitatitra i Paula Góes.
Frantsa: Manokatra Ny “Fikambanan'ny Fanondro Manga” Ny Toniziana Any Am-pielezana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Oktobra 2011
Mifarana izao ny telo andro natao hifidianana ho an'ireo Toniziana monina any ivelany ary nananganany "vondrona fanondro manga" any amin'ny tambajotra sosialy. Mampidera ny fanondrony miloko manga ireo Toniziana mpifidy tany Frantsa - porofo fa anatin'ny fikambanan'ireo mpifidy tany ampiandohan'ireo fifidianana ny "assemblée constituante" Toniziana manan-tantara ry zareo.
Espana: Ny Tolon'ny 15 Oktobra Sy Ny Tatitr'ireo Haino Aman-jery
Espaina 23 Oktobra 2011
Tena nahavory olona maro tokoa tany Espana ny fihetsiketsehana maneran-tany ny 15 Oktobra izay nitaky ny fampiharana ny tena demokrasia sy nanohitra ny kolikoly ataon'ireo orinasam-pitantanam-bola. Ato amin'ity lahatsoratra ity, aborakay ny fomba nitateran'ny sasany tamin'ireo haino aman-jery espaniola izany hetsika izany, sy ny adihevitra teo amin'ireo mpampiasa aterineto.
Frantsa : Fanalàna Azy Ho an'ny Tontolon'ny Tweet Ny Fampielezan-kevitra Hofidiana ho Filoha
Frantsa 19 Oktobra 2011
Dia efa tena nanomboka tokoa moa izany ny fampielezan-kevitra ho fidiana ho filoham-pirenena 2012 ao Frantsa ary manaporofo izany ireo tambajotra sosialy toy ny Twitter. Ireo fifidianana savaranonando ho an'ny kandidà avy amin'ny elatra havia dia nampanonjanonja tokoa ny tontolon'ny fanapariaham-baovao tato anatin'ireo herinandro faramparany teo sady namoaka an'i François Hollande ho solontenan'ny antoko sosialista (PS). Marobe ireo lohahevitra tena nifanakalozana niresaka momba ny fifidianana no mipongatra sy miteraka fanehoan-kevitra mahatsikaiky ao amin'ny twitter eo amin'ireo mpampiasa io tambajotra sosialy io
Sakafo Manerana Ny Tany Ao Amin'ny Blog Action Day 2011
Afrika Mainty 17 Oktobra 2011
Isan-taona nanomboka tamin'ny 2007 dia mampiray ireo bilaogera manerana ny tany ny Blog Action Day amin'ny firesahana mikasika olana iray manokana eto amin'izao tontolo izao. Anaty fifanotronana dia mahazo mpanaraka an-tapitrisany ireo bilaogera mpandray anjara ireo. Ary tamin'ity taona ity, ny 16 Oktobra 2011 izy ireo dia niresaka momba ny sakafo.
Andron'i Ada Lovelace : Mihetsika Ireo Vehivavy Fitaratra
Afrika Mainty 16 Oktobra 2011
Ny Andron'i Ada Lovelace (7 Oktobra) dia mikatsaka ny hampakàrana ny tahan'ireo vehivavy manao siansa, teknolojia, fianarana ho injeniera ary matematika amin'ny alalan'ny famporisihana ny olona manerana izao tontolo izao hiresaka momba ny vehivavy izay ankasitrahan'izy ireo ny asa ataony. Vakio ato ny fahatsiarovan'ny Global Voices.
Tontolo: Adihevitra Ao Anaty Aterineto Mikasika Ny Teknolojia Ho Amin'ny Mangarahara
Amerika Latina 14 Oktobra 2011
Ny Hetsika Teknolojia ho amin'ny Mangarahara, iarahana amin'ny Paikady Vaovao amin'ny resaka Zon'Olombelona, dia manasa anao handray anjara amina dinidinika anaty aterineto momba ny 'Fampiasana Teknolojia mba Hampiroborobo ny Mangarahara'. Miaraha aminay hiresadresaka mikasika ireo hevitra vaovao, ireo fanamby, ireo risika sy tombontsoa.
Espana: Polisy “Niarahaba” Ireo Mpanao Hetsika 15M Tao Paris
Espaina 05 Oktobra 2011
Niainga taminà tanàna maro samihafa tao Esapana sy Frantsa ny " ny diaben'ireo olona sorena" mba hamakivaky an'i Eraopa, ary dia nirahaba izany tamin'ny fombany ny polisy tao Pari. An-jatony ireo olona nizotra ho any amin'ny Parlemanta Frantsay no voataritarika tamin'ny tany, nofafazana dipoavatra ary nosamborina. Mitatitra i Chris Moya.
Maraoka: Tetikasa Zotran-dalamby TGV Vita Frantsay Miteraka Resabe
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Oktobra 2011
Ny Alakamisy 29 Septambra 2011, nitsidika an'i Maraoka ny Filoha Frantsay Sarkozy mba hanotrona ny fanombohana ny asa fanorenana zotram-piarandalamby TGV mampitohy ireo tanàna ao Tangier sy Casablanca. Mametra-panontaniana ireo bilaogera Maraokana mikasika izay antony ao ambadik'izao ary manontany raha tena ilain'ny fireneny tokoa ny tetikasa lafo vidy be toy izao.